नेकपा-नेकपा शिखर वार्ता - व्यंग्य - प्रकाशितः कार्तिक १७, २०७६ - नेपाल
अमेरिकी राष्ट्रपति र उत्तर कोरियाली राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता भएको धेरै भएको छैन । भर्खरै पनि चिनियाँ राष्ट्रपति र नेपालका प्रधानमन्त्रीले भेटवार्ता गरे । त्यसको केही दिनपछि नेकपाका अध्यक्ष र नेकपाका अर्का अध्यक्षबीच भेटवार्ता भएकोे समाचार आएको छ । हुन त हामीले नेपाली कांग्रेसका सभापति र कांग्रेसकै वरिष्ठ नेताबीच, राप्रपा अध्यक्ष र राप्रपाकै उपाध्यक्षबीच भेटवार्ता भएको पनि सुनेका छौँ । लामो समयपछि यसपालि फेरि नेकपा र नेकपाका अध्यक्षबीच भेटवार्ता भएछ । एउटै पार्टीका दुई अध्यक्षबीच भेटघाट र शान्तिपूर्ण वार्तालाप भएको समाचार हाम्रा लागि निकै मनोरन्जनपूर्ण छ ।
यो भेटवार्ता पक्कै पनि सजिलै भएको होइन होला । नेकपा अध्यक्ष र नेकपा अर्का अध्यक्षबीच भेटवार्ता गराउन नेकपा यता र नेकपा उताका पदाधिकारीबीच पटक-पटक भेटवार्ता भएको हुनुपर्छ । उनीहरूबीच लामो छलफल, रस्स्ााकस्सी भएर बल्लतल्ल अध्यक्ष र अध्यक्षलाई भेट गराउने निर्णय भएको होला ।
अध्यक्ष 'आजचाहिँ वार कि पार गर्छु' भन्दै वार्ताका लागि गए होलान् । उनलाई अध्यक्षको सचिवालयका सदस्यहरूले बैठक कक्षमा राखेर कफी खुवाए होलान् । ४५ मिनेट कुरेपछि नेकपाका अर्का अध्यक्ष आए होलान् । अध्यक्ष आएको देखेर हात मिलाउन खोज्दा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) ले हात मिलाउँ कि नमिलाउँजस्तो गर्दै बल्लतल्ल हात दिए होलान् र सोफामा बसे होलान् ।
सोफामा बस्दै अध्यक्षले भने, 'के छ त खबर ?'
'ठीकै छ ।' अध्यक्षले भने । 'तपाईंको स्वास्थ्य कस्तो छ नि ?' उनले थपे ।
'मेरो स्वास्थ्यको चिन्ता लिनु पर्दैन । देशको स्वास्थ्यको चिन्ता लिनुस् । म नभएका बेला राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्न खोज्नुभएछ । जनतामा भ्रम फैलाउन खोज्नुभएछ । मिडियामा अन्तर्वार्ता दिएर मलाई दबाब दिन प्रयास गर्नुभएछ । यो त राम्रो भएन नि ! म त्यस्ता दबाबबाट दबिने मान्छे होइन भन्ने तपाईंलाई थाहा छैन र ?' अध्यक्षले आक्रोशमिश्रति स्वरमा भने होलान् ।
'मैले त्यस्तो केही गरेको छैन । समझदारीको कार्यान्वयन होस् भन्ने मात्रै चाहेको हो । हाम्रो विगतको आलोपालोको कुरा स्मरण गराउन मात्र खोजेको हो ।'
'के आलोपालो ?'
'आलोपालो पदमा बस्ने सम्झौता ।'
'कहिले भयो त्यस्तो सम्झौता ?'
'पार्टी एकता गर्ने बेलामा ।'
'एकता नभाँडियोस् भनेर उबेला गरेको गफलाई सम्झौता भन्दिने ? केही वर्ष धैर्य गर्न सक्नुहुन्न ? म जुनीभरि पदमा रहिरहने त होइन नि ! अध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्छ ।'
'अध्यक्ष पनि त चलाउन दिनुभएको छैन ।'
'किन छैन ? सबैले नेकपा अध्यक्ष भनेकै छन् । पत्रिकाहरूले लेखेकै छन् । माइन्युटमा अध्यक्ष भनेरै सही गर्नुभएको छ । के चाहियो अरू ?'
एउटा अध्यक्षको कुरा सुनेर अर्का अध्यक्ष बोल्नै नसक्ने भए होलान्, रिसले ।
अध्यक्ष गलेको देखेर अर्का अध्यक्षले उठ्तै भने होलान्, 'आजको शिखर वार्ता यहीँ सकियो । अब हामीबीच रहेका सबै भ्रम समाप्त भए ।'
यति भनेर अध्यक्ष भित्र पसेपछि अर्का अध्यक्ष पनि जुरुक्क उठेर रन्थनिँदै बाहिर निस्के होलान् र मिडियाहरूलाई अध्यक्षद्वयबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहेको बताएर बाटो लागेपछि हामीले पनि एउटै पार्टीभित्रका अध्यक्ष-अध्यक्षबीचको शिखरवार्ताको समाचार सुन्न पायौँ । फेरि-फेरि पनि यस्ता मनोरञ्जक समाचार सुनिरहन पाइयोस् ।